Global Voices teny Malagasy » Rosia : Miala Any Ny “Pussy Riot” & Ny Fitsarana Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Aogositra 2012 7:59 GMT 1	 · Mpanoratra Andrey Tselikov Nandika nirinandrea
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Akon'ny RuNet
Tena mahagaga ny tsy firaharahian'ny olona azy io raha ny fandrakofana be azon'ilay tranga tany am-piandohana no jerena. Ny taona 2011, andianà mpifindra monina voaray hiasa tao Caucasus no voalaza fa nirohotra nanafika tanàna iray antsoina hoe Sagra  [ru], noho ny disadisa tao an-toerana nahatafiditra zaza tsy ampy taona iray mpaninjara rongony. Nampitovian'i Aleksei Navalny, tamin'ny ” Spartan warriors”  [ru] ireo izay mponina nahavita niaro ny tenany samy irery ary nahavita namono mihitsy iray tamin'ireo mpanafika aza.
Etsy ankilany, Navalny dia niantso ireo mpikambana tao amin'ny tarika Pussy Riot voasambotra hoe “vehivavy mitapy ,” ary niantso ny hetsika nataon'izy ireo ho “resaka dokam-barotra fampahafantarana.” Tsy nampihemotra azy izany fivadihan-javatra izany, tao anatin'ny fampahafantarany ny tenany mba hijoro ho vavolombelona amin'ny Fitsarana azy ireo  [ru], araky ny fahitany azy, mba hanamarina ilay”natiora politika”-n'ilay fampisehoana nataon'ny Tarika tamin'ny volana February tao amin'ny Katedraly “Christ the Savior” (Kristy Mpamonjy). (Tsy navelan'ny fitsarana hanao fijoroana vavolombelona i Navalny.) Mbola tsy naneho ny heviny tamin'ny fitsarana an'i Sagra izy .
Angamba mety ho hafa ny fihetseham-po, fa angaha i Evgeny Roizman , ilay mafana fo mipetraka any Yekaterinburg, manohitra ny fidoroana dia tsy mahatsiaro tena ho voakasik'izany teo aloha. Amin'ny ampahany dia ny fanairany ny fahatongavantsain'ny mponina mikasika ny zava-nitranga avy hatrany taorian'ilay fitsarana no mahatonga ankehitriny ilay fitsarana amin'izao fotoana ‘hankaleo’ ny ankamaroan'ny Rosiana. Teo am-piandohany, dia ireo mponina teo an-tanàna, fa tsy ireo jiolahim-boto, no notsiniana ho nitarika ny herisetra, nahatonga ireo Rosiana “tsara, marina” hifanjevo tamin'ny fitsarana. Amin'izao fotoana izao, na izany aza, dia ireo mpikambana 23 voalaza fa “andian-jiolahimboto “[ru] no niakatra fitsarana.
Kanefa, na ankehitriny aza, dia mbola mahagaga ihany hoe toa hita ho mankaleo sy tsy dia misy dikany loatra ny raharaha Sagra. Ary na izany na tsy izany, nisy olona iray namoy ny ainy tamin'iny, ary tandindonin-doza ny ain'ny olona sy ny fananan'izy ireo. Miresaka fironana mahery setra anaty tsy fanarahan-dalàna ilay tranga ary Fanaparam-pahefana any amin'ny tany lavitra andriana. Na dia nifarana haingana aza iny fanafihana iny ary tsy dia nisy rà nandriaka loatra, dia nisy fanafihana nitam-piadiana ihany tany amin'ireo fiarahamonina madinika izay tsy mba nitàm-piadiana– Tokony ho tsaroan'ny tsirairay ny Vono Olona tao Kushchevskaya  [ru].
Ohatra tsara eo amin'ny fihetsiky ny fitsarana Rosiana iny raharaha iny — hita ao daholo ny mariky ny tsy fetezana : fitsarana izay mampifamadina ny niharam-boina amin'ny mpanao heloka toy ny efa zava-panao raiki-tampisaka, fibaradahana noho ny tsindry ataon'ny vahoaka; ary ny famotsorana ny sasany amin'ireo voampanga amin'ny fampandoavana onitra  [ru], raha toa ilay mpiady tranainy iray izay notsarain'io fitsarana io ihany, raharaha tsy nisy herisetra tsy afaka nialàna akory tamin'ny fitanana am-ponja vonjy maika nandritra ny herintaona.
Ny fitsarana an'i Sagra aza navela nanao fianianana tao an-trano fitsarana ny mpiaro ary nangataka ny handàvan'ny mpitsara ny tenany ihany. (Tsy neken'ilay mpitsara, mazava ho'azy.) Ny iray tamin'ireo voampanga dia nokaikerin'ny alika mpiambina  [ru], raha toa ka tompon-daka amin'ny haiady kosa ny iray .
Angamba ny fototr'olana dia ny tsy fahatakarana loatra ny atao hoe tsy manan-tsny raha tsy efa voatsara (presumption of innocence). Raha vao nampangain'ny fitsaram-bahoaka ny mpanafika, dia mety hiato tsy hiraharaha ny fitsarana . Sarotra aloha ny hino hoe ireo mpiasa 23 ireo, tsaraina miaraka amin'ny fotoana iray, no hizara mitovy ny heloka iampangana azy. Na dia izany aza, Roizman dia niantso azy ireo hoe “V**n'omby” tamin'ny tsy fanaovan'izy ireo fialantsiny  [ru], mifandraika amin'ny fomba nangatahana ireo fialantsiny (ary farany voaray  [ru]) avy tamin'ny Pussy Riot.
Ny 3 Aogositra tao amin'ny Twitter  [ru] , ilay mpanao gazety Vladimir Soloviev dia niatrika ilay resaka tsy misy farany momba ny Fitsarana ny Pussy Riot : “Tsy misy hahatakatra mihitsy hoe toy izany no fomba fitondran'ny Fitsarantsika ny olona rehetra.” Mandra-pijanon'ny olona tsy hibanjina zavatra iray amin'ny fotoana iray , ary hifantoka amin'ny tontolon'ny resaka lalàna , dia toa tsy hisy zavatra hiova mihitsy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/18/36535/
 Pussy Riot : http://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
 nanafika tanàna iray antsoina hoe Sagra: http://www.agoodtreaty.com/2011/07/14/russia-after-sagra/
 Spartan warriors”: http://navalny.livejournal.com/602782.html
 vehivavy mitapy: http://navalny.livejournal.com/690551.html
 vavolombelona amin'ny Fitsarana azy ireo : http://golishev.livejournal.com/2133728.html
 Evgeny Roizman: https://globalvoicesonline.org/2012/04/21/russia-anti-drug-activist-identifies-corrupt-moscow-police-in-sverdlovsk/
 mpikambana 23 voalaza fa “andian-jiolahimboto: http://roizman.livejournal.com/1420239.html
 Vono Olona tao Kushchevskaya : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
 famotsorana ny sasany amin'ireo voampanga amin'ny fampandoavana onitra : http://chalova-e.livejournal.com/55667.html
 nokaikerin'ny alika mpiambina : http://newsru.com/russia/03aug2012/sagra.html
 amin'ny fanalalahana ny fanànana basy tsotra : https://globalvoicesonline.org/2012/08/02/russia-handgun-ownership-proposal-sparks-debate/
 tamin'ny tsy fanaovan'izy ireo fialantsiny : http://roizman.livejournal.com/1420756.html
 tao amin'ny Twitter: http://twitter.com/VRSoloviev/status/231374914316283904